daadah.com - Heerarka Korriinka
Posts in the ‘Heerarka Korriinka’ Category
Ilmaha gaaray bisha todobaad waxay noqonayaan kuwo darreemaya isku-filaansho oo diyaarinaya shaqsiyadooda u gaarka ah. Dhallaanku bishaan waxay bilaabaan inay dhaqdhaqaaqaan. Waxay sameeyaan inay guurguurtaan, inay xamaartaan, inay dhinacyada isku rogaan amaba inay salka ku siqaan. Mararka qaar ilmuhu afartaas dhaqaaqba way isku daraan. Ilmaha guurguuranaya waxaa wanaagsan in lagu dhiirigaliyo inuu dhaqdhaqaaqo iyadoo hortooda
Ma jiro muuqaal ka fiican ilmahaaga oo dhabta kuu saaran, baaquli cunto ah oo aad u soo diyaarisay gacanta kuugu jiro, qaado yar oo le’eg afka ilmaha baaquliga dhextaal, dabadeed cuntadii qaadada aad ku qaadid oo ilmaha afkiisa la galiyo. Qaar ka mid ah cuntada dhabtaada ku daadatay, qayb ka mid ah ilmuhu muudsado,xooggaa kale
Hambalyo! Waxaa ilmahaagu soo gaaray bartamihii ama nuskii ugu horeeyay ee cimriga ilmahaaga sannadka ugu horeeya. Waqtigaan dhallaanka lixda billood jiraa way fariisan karaan inkastoo ay dhinac u guddoomi karaan wax yar kadib, waxay bilaabeen inay cunaan cuntada adag, waxay muujinayaan iligii ugu horeeyay ee curidkiisa dulaakhnaa ka soo baxa. Ilkaha ugu horeeya ee ilmaha
5 Billood jir
Bisha shanaad ee cumriga ilmaha waxaa lagu tilmaamaa bishii fadhiga. Ugu yaraan bishaan cunnugaagu wuxuu awoodaa inuu fariisto isagoo kaalmo ka helaya marka barkimo dhinacyada lagaga tiiriyo. Sidoo kale, wuxuu awoodaa inuu xukumo madaxiisa ilaa xad. Waxaa suuragal ah in dhallaanka yar yari xilligaan magacooda yaqaanaan, oo marka magacooda loogu yeero ku soo eegaan iyaga
Dhallaanka afarta billood jiraa waxay soo gaaraan waqti uu jirkoodu aad u korayo, waayo ugu yaraan miisaanka cunnugu hadda waa labo jibaarmay dhalashadiisii ka dib. Haddii aad welwel ka qabto miisaanka ilmaha oo aan kordhin la kulan dhaqtarka carruurta. Xilligaan carruurtu waxay ku muujiyaan darreenkooda dhoola-cadayn iyo haddaaq naxariisi ku dheehan tahay. Waxay ilmuhu hadda
3 billood jir
Cunnugaaga 3 billood jir ahi mar hore ayuu bilaabay dhaqdhaqaaqa uu rabo inuu ku socdo. Maadaama murqaha luqunta iyo qaarka hore ay koreen hadda cunnugaagu wuxuu isku dayayaa inuu dhinacyada u galgasho isaga oo is rog-rogaya, waayo waxaa qaangaaray murqaha miskaha iyo kala-goysyada oo u sahlaya inuu is rog-rogo. Waa marka ilmuhu bilaabaan inay gacmaha
Waa haggaag! waxaad ka soo gudubtay hawshii adkayd ee labadii bilood ee la soo dhaafay. Ilmuhu wuxuu soo gaaray heer korriin oo cusub oo ah labo billood jir ah. Laakiin, weli wuu yar yahay ilmuhu oo weli howshii inteedii badnayd way ku hortaal. Xilligaan ilmuhu caadiyan waxay indhaha la raacaan ilayska dhalaalaya, waxay in badan
Dhallaanka marka ay jirsadaan hal bil waxay soo gaareen heer korriin oo la wada sugayay. Ilmaha yar xilligaan lama saadaalin karo hurdadiisa waxaa laga yaabaa inuu habbeenkii saacado fiican hurdo. Qaarkood waxay hurdaan labo saac halkii quudinba. Dadka ku takhakhusay cilmiga hurdada waxay ku talinayaan in dhallaanka gogosha jiifka la geeyo inta aysan gam’in, laakiin
3 asbuuc jir
Dhamaadka asbuuca sadexaad hooyooyinku waxay kala ogaadeen dhibaatooyinka caafimaad iyo kuwa caadiga ah ee ilmaha yar. Hooyadu waxay baratay dabeecada ilmaheeda ilaa xad, waxay kaloo baratay habka iyo jidwalka quudinta ilmaha iyo hurdada. Asbuucan isbadalada dhallaanka waxaa ka mid ah iyada oo xuddunta gumadkeedii uu dhacayo. Meesha ay ka go’day xuddunta waxaa muhiim ah in
Ilmuhu marka uu gaaro asbuuca labaad waxaa muhiim ah dhamaan dhaq-dhaqaaqa dabiiciga ah. Dhallaanku waxay ku mashquulsan yihiin naas-nuugista, wax-qabsashada, raadinta meesha uu ka jiro naaska hooyadiis iyo il-libiqsiga. Carruurtu waxay daawanayaan wajiyada waalidkood marka dhabta la saaro, waxay u baahan yihiin iyana in la daawado wajiyadooda, loo dhoolo-cadeeyo oo madaxa si waafaqaad ah loogu